Dowladda Belarus oo marti galineysa wada hadallo dhex mara Ukraine & Ruushka - Iftiin FM
Dowladda Belarus oo marti galineysa wada hadallo dhex mara Ukraine & Ruushka
by Iftiin FM Reporter February 28, 2022
Dowladda Belarus, ayaa daboolka ka qaaday iney diyaarisay goob lagu marti galinayo wada hadal u dhaxeeya wufuud ka kala socota Ukraine iyo Ruushka, iyadoo duullaanka maamulka Moscow uu ku qaadey dalka dariska ee dhaca dhanka galbeed uu galey maalintii shanaad.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo hub ku wareejinayo dalka Belarus
Dowladda Ukraine ayaa sida oo kale sheegtay iney diblomaasiyiin u dirto meel u dhow xuduudda Ukraine iyo Belarus, inkastoo ay jiraan warar sheegaya in kaligii taliyaha dalkani, Alexander Lukashenko, uu diyaariyey ciidamo ku biira duullaanka lagu qaadey Ukraine.
Jubbaland oo eedeyn dusha ka saartay dowladda Soomaaliya.
Xeerarka doorashooyinka dalka Somalia.
Sare u kac ku yimid qiimaha la siisto baabuurta la soo isticmaalay Kenya.
Dr William Ruto iyo wafdiga la socday oo gaaray magaalada Washinton ee dalka Mareykanka